प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण – चर्चा बढी उपलब्धि कम – BRTNepal
काठमाडौं: १६:४६ | Colorodo: 05:01
बिआरटीनेपाल २०७५ असार ८ गते ८:५७ मा प्रकाशित
नेपाल र चीनबीच केरुङबाट रसुवागढी हुँदै काठमाडौँसम्म जोड्ने रेल निर्माण लगायतका १० वटा सम्झौता तथा चारवटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भए ।
तर पनि भ्रमणबाट सोचे जस्तो सफल्ता हासिल गर्न नसकेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । कतिपयले भ्रमणलाई सहमति र सम्झौताहरुको संख्या बढाउने भ्रमणका रुपमा मात्रै अर्थाएका छन् ।
नेपाल चीन बीच पारवाहन समझौता प्रोटोकलमा हस्तक्षर हुन नसक्नुले यस प्रकारको विश्लेषणलाइ थपबल पुर्याएको छ । भ्रमणमा नेपालले समुद्रसम्म पहुँच पाउने गरी व्यापार तथा पारवाहनसम्बन्धी सम्झौता प्रोटोकोलमा हस्ताक्षर हुने चर्चा चले पनि त्यसमा खासै प्रगति भएन । जसले नेपालको दक्षिणी नाकाको निर्भरतालाइ कायमै राख्ने देखिएको छ ।
यसै गरी बजेटले स्वदेशी लगानीमा गर्ने उल्लेख गरेको तर लगानी बोर्डले चिनिया कम्पनीसँगै रहेको भनिएको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनामा सम्वन्धमा समेत कुनै प्रगति भएको देखिएन । पश्चिम सेती परियोजना छिटो सकाउन भ्रमणका सम्वन्धमा कुरा नआउनु चिनियाँ कम्पनीलाई ओली सरकारले चिढ्याएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
यसै गरी निकै लामो सम्बन्ध रहेको उत्तरी छिमेकी चीनले पछिल्लो समय उनीहरूको महत्त्वाकांक्षी सडक योजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ मार्फत नेपालसँग सडक सञ्जाल जोड्न चाहेको देखाए पनि प्राथमिकताका साथ नेपालले स्वागत गर्न नसकेको जवाफ चीनले दिएको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
भ्रमणको क्रममा चीन सरकार चीनका नीजि लगानीकर्ता सहित गरी २३ वटा सहमती एव समझदारी बनेका छन् । संख्याका हिसाबले धेरैवटा सहमतिहरु भएको देखिए पनि परियोजनागत हिसाबले हेर्दा रेल्वे र प्रशारणलाइन बाहेक अन्य सहमितहरु खासै ठूला देखिँदैनन् ।यसका साथै सहमतिका कतिपय विषयहरु अमूर्त प्रकारका छन् ।
के भए त समहती र समझदारीहरु ?
हटेन चीनया आशंका !
नेपाल चीनको प्राथमिकतामा छ तर त्यो केवल उसको तिब्बतको सुरक्षा जोखिमलाई केन्द्रमा राखेर मात्र हर्दै आएको स्पष्ट हुन्छ । चीनसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएयता नै नेपाल ‘एक चीन नीति’ को पक्षधर रहिआएको छ। तर पनि नेपालमा बेलाबखत भइरहने भनिएका स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर गतिविधि र तिब्बतमा हुनसक्ने घुसपैठले चिनियाँ पक्ष सशङ्क भएको देखिन्छ । तातो पानि नाकाको पुन संचालन अतिरिक्त थप नाका खोल्ने विषयमा सहमती नबन्नुले पनि यसलाइ थप स्पष्ट पारेको छ । यद्यपी चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमण गर्ने बताएका छन् । चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले सन् १९९६ डिसेम्बर (२०५३ मङ्सिर १९ र २० गते) दुई दिने नेपाल भ्रमण गरेयता कुनै पनि चिनियाँ राष्ट्राध्यक्षले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका छैनन् । २०७३ को असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुने तय भएको भनेर नेपाली राजनीतिमा चिया गफ हुने गरेको भएपनि सीले नेपाललाई वास्ता नगरी कम्बोडिया र बंगलादेशको भ्रमणमा निस्के । सार्क मुलुकमा सि ले नेपालको मात्र भ्रमण गरेका छैनन् । तर भारतको तर्फबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तीनपटक नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन् ।